အဘယ်ကြောင့် BROWSER ကိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်? ကအရှိန်မြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လို - BROWSER များ - 2019
ကျွန်မဘရောက်ဇာကိုဘရိတ်ဖြတ်ပြီးနီးပါးတိုင်းအသုံးပြုသူက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုသောအခါထင်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကနှေးကွေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် ...
browser ကိုတားစီးနိုငျသောကွောငျ့သောအကြောင်းပြချက်များ - တွေအများကြီးပေမယ့်ဒီဆောင်းပါးမှာပါငါသုံးစွဲသူအများစုအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်လူကြိုက်အများဆုံးအာရုံစိုက်ချင်ပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြံပြုချက်တစ်အစုံ - တစ်ဦးထက်ပိုအဆင်ပြေမြန်ဆန်အဘို့သင့်ကို PC အလုပ်လုပ်!
start ကြပါစို့ ...
browser များဘရိတ်ထဲမှာပေါ်လာဘာလို့လဲဆိုတော့အရာ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများ ...
1. စွမ်းဆောင်ရည်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ...
ကျွန်မအာရုံကိုဆွဲချင်သောပထမဦးဆုံးအရာ - ဤသင်၏ကွန်ပျူတာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ ထို့နောက်သူကသူနှေးကွေးမှစတင်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး ... - အဆိုပါအချက်ကိုကို PC ဒီနေ့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများက "အားနည်း" ဖြစ်ပါတယ်, သင်သူ့ကိုအသစ်တစ်ခုကို browser + extension များနှင့်ဖြည့်စွက်တောင်းဆိုသတ်မှတ်ထားလျှင်ကြောင့်
သိပ်အများကြီး extension များ (သာအများဆုံးလိုအပ်သော) ကိုထည့်သွင်းဖို့မကြိုးစား;
အလုပ်မှာ, (တစ်ဒါဇင်နဲ့အခြား tabs များ၏အဖွင့်မှာမဆို browser ကိုနှေးကွေးရန်စတင်နိုင်ပါသည်) tabs များတွေအများကြီးဖွင့်လှစ်မထင်သော်လည်း,
မှန်မှန် (အောက်ကဆောင်းပါးထဲမှာအသေးစိတ်ဤအကြောင်းကို) OS ကို Windows ရဲ့ browser ကိုသန့်ရှင်းရေး;
plug-in ကို type ကို "ဒီနေရာမှာ Adblock" (အရာပိတ်ပင်တားဆီးမှုကြော်ငြာ) - "ကို double-သန်": တစ်ခုသောနေရာ၌ plug-in ကိုက PC ကို load နှင့်ပြသရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဆိုလိုတာကပိုလျှံကြော်ငြာဖယ်ရှားပေးအပေါ်; အခြားတစ်ဖက်တွင် - စာမျက်နှာ plugin ကို loading ရှေ့မှာဖတ်နဲ့ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှား, ဤ surfing နှေးကွေး;
(က Chrome သို့မဟုတ် Firefox အတွက် (ဥပမာ), သူတို့က extension တွေနဲ့အတူထည့်သွင်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်စဉ်, ပြီးသားသူတို့ကိုတွင်ထည့်သွင်း features တွေကိုအများအပြားနှင့်) ကိုယ့်နှေးကွန်ပျူတာတွေအတွက် browser များကြိုးစားရန်အကြံပြုပါသည်။
တစ်ဦး Browser ကို (ဒီတစ်နှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး) ရွေးချယ်ခြင်း:
2. Plugins တွေကိုနှင့် extension များ
ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအကြံဉာဏ်ကို - သင်မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်း extensions တွေကိုမတပ်ဆင်ပါနဲ့။ အုပျစိုး "နှင့်ထို့နောက်ရုတ်တရက်ရပါလိမ့်မယ်" - ကဒီမှာ (ကျနော့်အမြင်၌) သုံးစွဲဖို့သင့်လျော်သောမဟုတ်ဘူး။
အထွေထွေစည်းမျဉ်းအတိုင်း, လိုအပ်သည့် extensions တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရိုးရှင်းစွာတိကျတဲ့စာမျက်နှာသင်၏ browser navigate, ပြီးတော့တိကျတဲ့ extension ကို select လုပ်ပါကဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အများအားဖြင့်, မသဲလွန်စ "left" ၏ချဲ့ထွင်ဖို့ browser ကို restart ပြန်လုပ်ဖို့ကပိုကြာပါတယ်။
extensions တွေကိုလူကြိုက်များ browser များကို configure လိပ်စာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးတော်မူ၏။
နေရပ်လိပ်စာ: chrome: // extensions တွေကို /
သင်္ဘောသဖန်း။ Chrome မှာ 1. အဆက်များ။
နေရပ်လိပ်စာ: မှာ about: addons
သင်္ဘောသဖန်း။ Firefox ကို2Installed extension များ
နေရပ်လိပ်စာ: browser ကို: // extensions တွေကို
သင်္ဘောသဖန်း။ Opera မှာ 3. Extensions (မတပ်ဆင်ရသေး) ။
3. Browser ကိုကက်ရှ်
cache - ကဘရောက်ဇာကိုသငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်း web page များကိုအချို့ဒြပ်စင်များသိုလှောင်ထားတဲ့အတွက်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Folder တစ်ခု (ထို "ကြမ်းတမ်း" ဟုပြောပါက) သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ဒီ folder ကို (က browser setting ကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိလမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်) အလွန်မြင်သာထင်အတိုင်းအတာမှပေါက်နေသည်။
ရလဒ်အနေနဲ့ browser ကိုတခါပြန် cache ထဲတွင် rummaging နှင့်မှတ်တမ်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှတဆင့်ရှာဖွေရေးပို့ချပိုမိုနှေးကွေးစွာလုပ်ကိုင်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ နှင့်အညီ, တစ်ခါတစ်ရံ, "ရှုတ်ထွေး" cache ကိုလည်းစာမကျြနှာမြား၏ display ကိုသာသက်ရောက်သည် - သူတို့ချော်, skew, etc သမျှသောဤကိစ္စများတွင်ကျနော်တို့သင်၏ browser cache ကိုရှင်းလင်းဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ် ..
သင့်ရဲ့ cache ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
အများဆုံး browser များအတွက်, ပုံမှန်အားဖြင့်, ခလုတ်ကိုသုံးပါ Ctrl + + Del Shift (အော်ပရာ, Chrome က၌, Firefox ကို - ခလုတ်အလုပ်လုပ်) ။ သူတို့ကိုသင် hit ပြီးတာနဲ့ပြတင်းပေါက်ပုံထဲမှာရှိသကဲ့သို့ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကဘရောက်ဇာကနေဖယ်ရှားပစ်ကြောင်းမှတ်သားနိုင်ပါတယ်ကျသော4။
သင်္ဘောသဖန်း။ Firefox မှာ 4. Clear ကိုသမိုင်း
အဆိုပါ browser မှာ Clear ကိုသမိုင်း:
4. သန့်ရှင်းရေးကို Windows
အချိန်ဖို့အချိန်ကနေ browser ကိုသန့်ရှင်းရေးအပြင်ကသန့်ရှင်းရေးနဲ့ Windows ၏ရန်အကြံပြုသည်။ ရုံတစ်ဖွဲ့လုံးကသင့်ရဲ့ PC ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါ operating system ကိုပိုကောင်းအောင်လွဲဖြစ်ကြဘူး။
စနစ်ကနေ "အပျက်အစီး" ကိုဖယ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်မှာ:
ပိုကောင်းအောင်အစီအစဉ်ကိုနဲ့ Windows ရှင်းလင်းရေး:
Windows 8 ကိုပိုကောင်းအောင်:
Windows 10 ကို Optimization:
5. ဗိုင်းရပ်စ်, adware, "ထူးဆန်းတဲ့" လုပ်ငန်းစဉ်များ
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ယခု inertia အသုံးပြုသူအများအပြားကိုကလစ်နှိပ်ပါ (သူတို့များသောအားဖြင့်အချို့သောအသေးစားအစီအစဉ်များ၏ installation ပြီးနောက် browser မှာ embedded နေကြတယ် ... နေ့ကိုပိုမိုလူကြိုက်များနေ့ကဖြစ်လာသည့် "နောက်ကိုပိုပြီး ... " တစ်ဦးကို tick မှာရှာဖွေနေသည်မဟုတ်ကြော်ငြာ module တွေ, ဒီဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်သားဖို့မမဖြစ်နိုင်တာကြီးနှင့် ) ကိုကြော်ငြာအများဆုံးနှင့်ဤ tick နောက်ကွယ်မှဝှက်ထား။
ရောဂါကူးစက်မှုကို browser ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ:
သူတို့အားသောနေရာများအတွက်ကြောင့် (စတာတွေကွဲပြားခြားနားသောကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ်, link) ဖြစ်တစ်ခါမျှရှိရာသူတို့အားက်ဘ်ဆိုက်များမှာကြော်ငြာ၏အသွင်အပြင်;
အောင်အကြံပြုချက်များ, အရွယ်ရောက်က်ဘ်ဆိုက်များ, စသည်တို့နှင့်အတူအလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ် tabs များ။ ,
အမျိုးမျိုးသောက်ဘ်ဆိုက်များ (Vkontakte နှင့်အတန်းဖော်မှဝင်ရောက်ခွင့်အဘို့ဥပမာ) ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိမှုအတွက် sms ကိုပေးပို့ဖို့ကမျးလှမျးခကျြ;
အထက်ပြားဘရောက်ဇာကို (များသောအားဖြင့်) အသစ်ခလုတ်နဲ့ icon များပေါ်ပေါက်ရေး။
ဤအရာအလုံးစုံကိစ္စများတွင်ငါစသည်တို့ကို, ဗိုင်းရပ်စ်များအတွက် adware browser ကိုစစျဆေးဖို့ပထမဦးဆုံးအရာအကြံပြု ထိုသို့ပြုမှမည်ကဲ့သို့သင်ယူဖို့, သင်အောက်ပါဆောင်းပါးများကိုရှာတှေ့နိုငျ:
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ browser ကနေဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ရှားရန်:
ထို့ပြင်ငါ Task Manager ကိုစတင်ရန်နှင့် PC ကို load ကြောင်းသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်စဉ်များရှိခဲ့ပါလျှင်ကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ Task Manager ကိုဖွင့်ဖို့, ခလုတ်ကိုနှိမ့်ချကိုင်ထား: ကို Ctrl + Shift + Esc (Windows 7, 8, 10 သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 5. dispatch ပေါင်းဘီကို - တင် CPU ကို
(ကျနော်ဒီအကြံပေးချက်ကိုအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်သက်ဆိုင်ရာကြောင်းသံသယပေမယ့်) သင်ယခင်ကအဲဒီမှာမြင်တွေ့ဖူးသောဖြစ်စဉ်များကိုအထူးဂရုပြု။ ကြွင်းသောအရာများအတွက်, ငါထင်အောက်တွင်ပေးထားသောသောသက်ဆိုင်သောဆောင်းပါး, ကိုကိုးကားကြလိမ့်မည်။
ဒီတွင်ငါအရာအားလုံးကိုရှိသည်။ ဤအကြံပြုချက်များပြီးပါကပြီးနောက်, browser ကိုပိုမြန် (အထိ 98% 🙂) ရက်နေ့မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ရပါမည်။ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်မှုများကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မည်။ အောင်မြင်သောအလုပ်။